ikhaya/10 Windows/Yenza ikhamera yewebhu isebenze ngaphakathi Windows 10
Vangelis11. Juni 2015
Ngekhamera yewebhu unga skype, uthathe iifoto okanye udubule iividiyo zabucala. Nangona kunjalo, ukuze ukwazi ukusebenzisa ikhamera yewebhu, kufuneka isebenze. Unokwenza ikhamera yewebhu isebenze kwikhompyuter yakho / ilaptop / ithebhulethi phantsi Windows 10 ngocofa nje okumbalwa.
Landela nje la manyathelo achazwe ngezantsi imiyalelo:
Sebenzisa i-PC yekhamera yewebhu yekhamera- ilaptop- ithebhulethi
Cofa kwiWindows logo ngasekhohlo kwaye uqhubeke ukulungiswa.
Kwiwindows entsha cofa Ukuba bucala.
Ekhohlo nqakraza ku "Ikhamera " kwaye usete isilayida ngasekunene "a".
Ukusukela ngoku ukuya phambili ikhamera yewebhu - ikhamera ikwi 10 Windows yenziwe yasebenza.
Apho unokukhetha ukuzichaza ukuba yeyiphi na i-webcam evunyelwe ukuyisebenzisa ngokukhetha isilayida ecaleni kweapp ku "Vuliwe" okanye "Valiwe".
Ikhamera yewebhu ayisebenzi
Abanye Windows 10 abasebenzisi banemicimbi nge webcam. Ikhamera yamkelwe kodwa ikhamera ayisebenzi phantsi Windows 10.
Le ikwayingxaki efanayo. Windows 10 ayinamalungelo okufikelela kwifayile ye- isixhobo kwaye akakwazi ukuya kubo.
Ukuba nawe unomdla, landela apha ngezantsi Ingcebiso. Emva koko, izixhobo ezixhunyiwe kufuneka zithande Iseti yentloko yemakrofoni okanye ikhamera yewebhu umsebenzi.
Imakrofoni okanye iseti yentloko ayaziwa ngaphakathi Windows 10
Susa Windows 10 ibhokisi yokukhangela
Guqula isandi sesaziso ngaphakathi Windows 10
Ngenisa Windows 10 abafowunelwa - nantsi indlela
IWindows 10 isebenza ngeakhawunti yendawo
Umlawuli wongeza ukuhlela ukucima-yindlela esebenza ngayo
Yenza kungasebenzi Windows 10 usetyenziso kwimenyu yokuqala
Cima usetyenziso olusele lufakiwe Windows 10
Windows 10 kutshanje kusetyenziswa amaqhosha amafutshane
sebenzisa Windows windows 10 IWindows10